Madaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray Guusha laga gaaray Deyn cafinta Soomaaliya (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Madaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray Guusha laga gaaray Deyn cafinta Soomaaliya (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
“Go’aankan taariikhiga ah kadib, Soomaaliya waxay fursad u heleysaa in ay dib ula fal gasho hay’adaha dhaqaalaha adduunka. Dib-u-habeynta qaabka maaliyadeed ee Qaranka Soomaaliya ee seddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa horseedday xiriirkan.”
Somali debt relief
Previous articleMuqdisho: Faahfaahin ku saabsan Qofkii labaad ee Dibadda ka yimid oo laga helay Coronavirus
Next articleXASAASI: Ma dhici kartaa adigoon Calaamadihii Coronavirus lahayn inaad sido Cudurkii…? (Akhriso)